Kuratidza zvinyorwa neelebheri piano
Piano (kubva lat. Claves = makiyi, makiyi) chinhu chinoshamisa che percussion chishandiso (icho chinodaidzwa kuti colloquingly piyano kana yaimbova fortepiano, zvakare ichishandiswa pianoforte). Izwi rayo rinogadzirwa nekubvunda kwetambo kwakadzvanywa nehunhu hwekunzwa nyundo. Iyo piano inoshandiswa sechiridzwa uye inoperekedza chiridzwa kana sechimwe chikamu chechechi.
Piyano hombe yakagadzirirwa kunyanya kuitirwa concert zvinodaidzwa kuti concert Grand piano (zvichienderana nechimiro chebhodhi redhiyo; tambo dzinoiswa musiyano). Iyo yenguva dzose, diki piyano ine resonance kabati (uye saka tambo) inoiswa yakatarwa inonzi piyano yakatwasuka. Anoridza piano mupiano kana pashoma kazhinji pianist.